कर्णाली प्रदेशमा नेताहरुले एमाले छाड्ने क्रम बढ्दोः एमाले पत्तासाफ बनाउन सक्लान माधवले ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
कर्णाली प्रदेशमा नेताहरुले एमाले छाड्ने क्रम बढ्दोः एमाले पत्तासाफ बनाउन सक्लान माधवले ?
एमाले विभाजन भएपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा खुल्न थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई २२ भदौसम्म दल रोज्ने समय दिएको छ । दल रोज्ने समय दुई दिन बाँकी रहँदा कर्णालीका १० जिल्लामध्ये दैलेख, जुम्ला, सल्यानका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले धमाधम दल रोज्न थालेका हुन् ।
दैलेखका २७, सल्यानका ६४, कालीकोटका ३० र जुम्लाका ३० गरी एक सय ५१ जनप्रतिनिधिले एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेका छन् । जसमा नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य छन् ।
एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वालको गृहजिल्ला सल्यानका ६४ जना जनप्रतिनिधिले एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेका छन् । शनिबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर उनीहरुले सनाखत गरेका हुन् ।
एमाले जुम्लाका ६१ सदस्यीय जिल्ला समितिमध्ये पदाधिकारीसहित ५८ जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । शनिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जुम्ला जिल्ला अध्यक्ष तीर्थ बुढा, उपाध्यक्ष नन्दबहादुर रोकाया, सचिव आदिप्रसाद न्यौपाने, उपसचिव राजबहादुर खत्रीसहितका जिल्ला सदस्यहरुले एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध भएको घोषणा गरेका हुन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दम्भका कारण आफूहरुले माधव नेपाल नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादी रोजेको प्रदेशसभाका सदस्य पदमबहादुर रोकायाले बताए ।
दैलेखमा एमालेका २७ जनप्रतिनिधिले एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेका छन् । सनाखत गर्नेमा गाउँपालिका अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुई, वडाध्यक्ष सात र बाँकी वडा सदस्य छन् । महावु गाउँपालिका अध्यक्ष जंगबहादुर शाही, उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी बुढा, वडा १ का अध्यक्ष डम्बर थापा, ४ का अध्यक्ष देव शाही, ५ का अध्यक्ष जगत हमाल, ६ का अध्यक्ष डम्बर थापा छन् ।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गर्ने वडा सदस्यहरूमा गोमा ढकाल, भीमसिंह दमाई, राज शाही, कविता गिरी, रश्मि विक, शेरबहादुर ठाडा मगर, खजुरा सुजी, खगिसरा तिमिल्सेना, खगेन्द्र खनाल, पानसरा थापा, शंकर बयलकोटी, रमेश केसी, मनकुमारी सुनार, रत्न श्रेष्ठ, नमराज शाही, कृष्णबहादुर रावत, र खड्गबहादुर शाही छन् । ११ स्थानीय तह रहेको दैलेखमा एमालेले सातवटा स्थानीय तह जितेको थियो । १४ जना प्रमुख÷अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षमध्ये आठजना एमालेमै रहेका छन् ।
६ जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । दैलेखका ९० वडामध्ये ५३ वटामा एमाले विजयी भएको थियो । ३१ जना वडाध्यक्ष एमालेमै र २२ जना एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीका नेता अम्मरबहादुर थापाले अझै ५० भन्दा बढी जनप्रतिनिधि समाजवादीमा खुल्ने दाबी गरे ।
कालीकोटका नौ स्थानीय तहमध्ये दुई गाउँपालिका अध्यक्ष÷दुई उपाध्यक्ष र एक नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा एमाले विजयी भएको थियो । जसमा नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्षमा धीरबहादुर बिष्ट, महावै गाउँपालिका उपाध्यक्षमा मनराज शाही, शुभकालिका गाउँपालिकामा अध्यक्षमा खडानन्द चौलागाई उपाध्यक्षमा पम्फा शाही विजयी भएका थिए ।
त्यस्तै, खाँडाचक्र नगरपालिका प्रमुखमा जसीप्रसाद पाण्डे र उपप्रमुख विजया बिष्ट विजयी भएकी थिइन् । त्यसमध्ये नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्ट, शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष चौलागाई, उपाध्यक्ष शाही र उपप्रमुख बिष्टले एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेको पूर्वएमाले सचिव चित्रसिंह गाउँलेले बताए ।कालीकोटका ४२ वडामध्ये २७ वटामा एमालेले जितेको थियो । त्यसमध्ये १६ वडा अध्यक्षले एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेको उनको भनाइ छ ।